Beravina - Wikipedia
18°10′00″S 45°13′00″E﻿ / ﻿18.166670°S 45.216670°E﻿ / -18.166670; 45.216670
Isam-ponina 2 505 mponina
Beravina dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'i Morafenobe, Faritanin'i Mahajanga. Ny isam-poniny dia 2505 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 42205 ary ny kaodin-distrika dia 422
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia canne a sucre. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny isan'omby dia 12000. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia banane. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 50 ny mponina no miasa tany. 50 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 150 no isan'ny kisoa.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia kamiao. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 76 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 77 ora. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 345000 Fmg. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny haintany dia 130000 Fmg.
50 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 5 volana. 1 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 49 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 2. Ao amin'ny atao hoe faritra mena ilay kaominina. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 3. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Beravina&oldid=952876"
Voaova farany tamin'ny 17 Novambra 2018 amin'ny 16:13 ity pejy ity.